Etu ịtọlite ​​autoplay na vidiyo YouTube | Akụkọ akụrụngwa
Atọ fanye a YouTube Video na akpaka playback
Autoplay nke vidiyo YouTube nwere ike ịbụ ihe dị mkpa maka ọtụtụ ndị na-ejikwa weebụsaịtị akpọrọ aha.
Nke a pụtara na ọ bụrụ na oge ụfọdụ anyị echebarala echiche jiri vidiyo YouTube n'ime weebụsaịtị na anyị chọrọ ka esenowo zọpụta nsogbu nke ịpị bọtịnụ "egwu" (egwuregwu), yabụ anyị nwere ike inye ya obere enyemaka site na aghụghọ nke anyị ga-ekwupụta n'okpuru.
Chọta koodu ntinye vidiyo YouTube
Ndị na-enye otu ibe weebụ ma ọ bụ blọgụ mara nke ọma na gburugburu ọrụ ọrụ kwuru Enwere ike iji ntuziaka HTML nke kachasị iji nweta ọrụ pụrụ iche. Iji mezuo ebumnuche anyị, anyị ga-eji koodu ntinye nke YouTube na-enye anyị, na-aga n'ihu dị ka ndị a:
Anyị na-aga na Portal YouTube.
Anyị na-achọ vidiyo YouTube nke anyị nwere mmasị na ya.
Ozugbo anyị chọtara ya, anyị ga-ahọrọ nhọrọ «kee ya»Emi odude ke ukot video.
A ga-egosi anyị ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ, na-ahọrọ nke na-ekwu «fanye".
N’oge ahụ, koodu ntinye ga - apụta, nke anyị ga - agarịrịidetuo na mado n'ime weebụsaịtị ebe anyi choroAma m na ihe onyonyo a dị. Ugbu a, anyị ga-agbakwunye obere iwu ọzọ na koodu ntinye:
Koodu nke anyị debere n’elu akụkụ bụ nke anyị ga-etinye n’ime nke YouTube nyegoro anyị. Ya mere, na ị nwere a mma echiche nke ebe ị ga-fanye ya, anyị ga-egosi gị na-esonụ nseta ihuenyo.
Dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo gara aga, n'ime koodu ntinye nke YouTube nyere bụ njikọ nke vidiyo dị na akara akara; gaa koodu ndi ozo anyi choro n’elu ị ga-edebe ya tupu njedebe ikpeazụ dị ka anyị gosipụtara na nseta ihuenyo gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Atọ fanye a YouTube Video na akpaka playback
Daalụ!! Ọ bụ naanị ebe m hụrụ koodu dị mma iji tinye mmepụta akpaaka. Zuru oke !! Daalụ
I meela nke ukwuu maka ikwu okwu ahụ, daalụ maka ọbịbịa gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igwu ọtụtụ vidiyo n'otu oge, olee otu ị ga-esi mee ya?
Na facebook ọ naghị arụ ọrụ. Amaghị m otú e si eme ya iji mee ka ọ na-akpaaka.
ezigbo koodu di nma
kedu ka o si arụ ọrụ maka facebook ... Agbalịrị m na ọ naghị egwu na akpaghị aka
Zaghachi Isabel Laiseca
Enweghi m ike ime ya ka ọ bụrụ na ọ na-emegharị na FACEBOOK E nwere usoro ọzọ
Zaghachi magdalenogarciamiguel magdaleno garcia
Etu esi emechi mmechi nke gam akporo TV-Box na oge mmechi
Etu ị ga-esi nwetaghachi ndị ọrụ Skype na mberede